Weerarradii ugu cuslaa oo Al-Shabaab loogu geystay Jilib, Bu’aale iyo Saakow – Hornafrik Media Network
Weerarradii ugu cuslaa oo Al-Shabaab loogu geystay Jilib, Bu’aale iyo Saakow
By Liibaan Nuur	 On Mar 5, 2020
Wararka aan ka heleyno gobolka Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in xalay dhowr magaalo oo ka tirsan gobolkaas ay ka dhaceen duqeymo iyo weerarro toos ah.
Duqeynta koowaad ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, taas oo bartilmaameedkeedu ahaa xarun ciidan oo Al-Shabaab ay ku lahaa yeen halkaas, waxaana la sheegay in xaruntaas gebi ahaanba duqeyn lagu burburiyey.
Saraakiil ka tirsan wardoonka Soomaaliya ayaa noo sheegay in weerarkaas lagu dilay gabi ahaanba dagaalyahanadii ku sugnaa xaruntaas, waxaana magaaloooyinka lagu weeraray Al-Shabaab ka mid ah degmada Saakow ee isla gobolka Jubbada Dhexe.
Bartilmaameedka weerarka Saakow ayaa ahaa sida la sheegay xarun ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay isku aruursanayeen, gaar ahaan kuwo la magic baxay Jabhada difaca Bardhere, kuwaas oo la sheegay in ay qor sheynayeen in ay weeraraan degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya u hadashay waxa ay sheegeen in halkaas lagu dilay dagaalamayaal badan, sidoo kalena lagu burburiyey gaadiid badan oo ay wateen. Waxaan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha Al-Shabaab loogu geystay weerarkaas.
Sidoo kale magaalooyinka xalay lagu weeraray Al-Shabaab waxaa kamid ah Bu’aale oo ah xarunta gobolka Jubbada Dhexe, waxaana Bu’aale ka dhacay weerar toos ah iyo duqeyn, sida ay sheegeen xubnaha noo waramay.
Ciidamo ka daatay diyaarado ayaa waxaa la sheegay in ay gudaha u galeen Bu’aale, isla markaana duqeyn culus lagu garaacay xarun ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku taalla gudaha magaaladaas.
Wararku waxa ay sheegayaan in ay jiraan saraakiil Shabaab ah oo nololsha lagu qabtay in kastoo aan la sheegin inta ay dhanyihiin, balse saraakiisha dowladda ayaa sheegay in Al-Shabaab iskaga baxeen magaalada, waxaana hawada ka maqan isgaarsiinta degmada Bu’aale ee gobolka Jubbada Dhexe.
Maxay tahay sababta shirkadaha diyaaradaha Afrika ay hal bil u khasaareen $400 miliyan?